Izicelo ezininzi zinengxaki nge-MacOS High Sierra kunye nenkqubo ye-APFS | Ndisuka mac
Utshintsho lwefayile ukusuka kwi-HFS + ukuya kwi-APF lubonisa umceli mngeni omkhulu kwiApple. Kwiimeko ezininzi, umsebenzisi akahlangabezani neengxaki, ukuba akunjalo. Inkqubo isebenza ngokutyibilikayo kunye nokuphuculwa kokukopishwa kwefayile okanye kwabasebenzisi benkqubo yokuqalisa ikhefu kunokuba banelisekile. Masingalibali ukuba amaqela aneediski ze-SSD kufuneka atshintshe yonke ifomathi yefayile ngaphandle kokutshintsha ukubonakala kweqela lethu. Kodwa ayisiyiyo yonke into eyonelisayo. Izicelo ze-Adobe zineengxaki ezininzi ngenkqubo ye-Apple yamva nje.
Sithetha ngayo I-Autocad, i-Illustrator CC kunye neAcrobat Reader. Kubonakala ngathi ingxaki ayikho i-MacOS High SierraUkuba ayisiyo inkqubo yefayile ye-APFS. I-Adobe yenxalenye yayo ikhuphe isiziba esineziphumo ezixubeneyo, ngaphandle kokufumana isisombululo esichanekileyo.
I-Autocad kuhlobo lwango-2017.0, ayihambelani ngokupheleleyo neMacOS ePhakamileyo yeSierra eqhuba kwifomathi ye-APFS. Ngokwahlukileyo, uguqulelo lwamva nje luka-2017.2 luxhasa i-HFS + kunye ne-APFS, kodwa kusafuneka ilungise ii-bugs ngokungakhathali.
Emva kokubonisana nenkonzo yezobuchwephesha yenkampani, basixelela ukuba iinguqulelo zangaphambili, 2015 no-2016, azilungiselelwe iMacOS High Sierra kwaye ubuncinci okomzuzwana, abacwangcisi ukukhupha uhlaziyo ukuxhasa inkqubo yangoku yokusebenza.
Abasebenzisi Umzekeliso CC Xela iingxaki kwinkqubo yefayile ye-APFS. Njengenkqubo yoyilo ye-Adobe, iingxaki eziphambili zivela kumacala aphezulu nangaphantsi. Abanye abasebenzisi bathetha ngeengxaki zokuqala usetyenziso, ukuvula ifayile okanye ukwenza uxwebhu. Inkampani iyathetha ngohlaziyo olusendleleni, ngaphandle kokuboniswa ngalo mbhalo. Ngamaxesha athile, abanye abasebenzisi baxela iingxaki ngee-GPU ezingaxhaswanga.
Okokugqibela, umfundi wexesha elide we-PDF kunye nomhleli Isifundi seAcrobat, Ibeka iingxaki xa ukhetha into kwi-dropdown kwaye uyivule ngePreview. Ukuba isenzo senziwe ngokuchaseneyo, ukusuka kuPhononongo lokuqala ukuya kwi-Acroba Reader kwenzeka into efanayo. Eli nyathelo liqinisekisiwe kwi-MacOS Sierra kwaye ingxaki ayenzeki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Izicelo ezininzi zinengxaki nge-MacOS High Sierra kunye nenkqubo ye-APFS
Ndizikhuphele izicelo ezininzi ze-adobe. Okwangoku kwimowudi yovavanyo. Azinakuhlaziywa. Uhlaziyo lukhubazekile kuzo zonke iinkqubo. Inkqubo yefayile yi-APFS.
Ndineengxaki ezininzi ngenkqubo yeApple APFS. Ndicinga ukuba amagqabantshintshi nezithunzi zale fayile intsha khange zichazwe kakuhle, ngakumbi "izithunzi".
Ngenxa yokuba kuye kwavela ukuba kukhuphelo lwangaphambili, izicelo ezimbini zinokosulelwa yintsholongwane (i-OSX Proton), enye yazo yiFolx enye Elmedia Player, (ngokwenqaku lakho, ndingumfundi oqhelekileyo kwiphepha lakho) leFolx la bendiyifakile kwaye isebenza kakuhle, kwaye ndayikhuphela xa oku kuvela. (Andazi ukuba ngendithe intsholongwane). Ndifomathile iMac nge-OSX 10.13 (APFS) eneenkampu zokuqala:
Eyokuqala andinakukucima ukwahlula iBootCamp (App BootCamp / Delete Windows) APFS ayamkeli ukuba inesahlulelo seBootCamp.
2º Xa ufuna ukufaka iMac kwasekuqaleni nge-USB (ngokucinezela Alt). I-USB ayikwazanga ukuqala inkqubo yofakelo.
3º I-chestnut pilonga »ukusetyenziswa kwe« Utillidad de Discos »ngumdaka onobumba abakhulu nabancinci.
Ngamafutshane into engaqhelekanga, le ivela kwi-APFS. Ungathini ukuba ... Ungathini ukuba ... ukuba le nkqubo izakuhamba njengesilika kodwa ... kukho izinto ezithile ezingaqhelekanga kancinci.
Ingaba ucinga ntoni? Kungcono ubuyele kwi-10.12.6 kwaye ulinde? Ngendlela, xa ufaka ukusuka ekuqaleni okanye uhlaziyo, inkqubo ukuba ifumanisa ukuba unayo i-SSD, ngokungagqibekanga iguqula / idlulise inkqubo yefayile kwi-APFS, ewe okanye ewe, ayiniki ukhetho, nokuba ibeka "iMac OS Plus kwirejista ".
Kule mpelaveki, silwe neSauron kwi-Mac yakho